Magaca Buugga: Safiirka
Qoraha: Peter Bridges
Turjumidda iyo Soo koobidda: Kamaal Marjaan
Buugga Safiirka waa buug uu qoray danjire Maraykan ah oo la dhihi jiray Petter Bridge, wuxuu Soomaaliya ka shaqaynayey muddadii u dhaxaysay 1984-tii illaa 1986-dii. Hase ahaatee wuxuu sawir buuxa ka bixinayaa siyaasaddii Soomaaliya intii ka danbaysay xoriyadda. Dhanka kale wuxuu daah-qaadayaa siyaasaddii arrimaha dibadda ee Maraykanka, wuxuu muujinayaa hardinkii ka dhaxeeyey Maraykanka iyo Midowgii Soofiyeeti.
Waxaan ka dheehday aqoon baaxad leh oo si gundheer u faarfaareysa duruufihii iyo fursadihii ku dahaarnaa siyaasaddii milatariga oo uu hoggaaminayey Maxamed Siyaad Barre iyo xaaladihii nololeed shacabka Soomaaliyeed haystay.
Marka laga soo tago maquurashada waayo-aragnimada diblomaasiyadeed, wuxuun buuggani faaqidayaa caqabadii haystay siyaasaddii sii daandaamaysay ee Millatariga, sida uu musuqmaasuquq u biyo dhigay, sida eexda iyo nin jeclaysigu uu caadi u haa halka uu ceeb ahaan lahaa, sida qabiillo gaar ah iskugu koobeen darkii siyaasadda. Si aan gabbasho lahayn ayuu u tibaaxayaa sawirkii foosha xubaa ee Soomaalida laga haystay gaar ahaan waddamada shisheeye.
Wuxuu dhowr jeer carrabka ku adkaynayaa in Soomaaliya loo wada yaqaanay “DALKII WAX ISII”. Taasna waxaa caddaynaysay sida dowladdii gebi-dhaclaynaysay ay cidkasta gacmaha ugu hoorsanaysay iyaga oo aan eegayn siyaasaddii xulufaysiga ku dhisnayd taas oo kalsooni darro ku abuurtay garabkii hanti-goosadka.
Dhanka kale, wuxuu aqoon mug leh oo miidi dhex ceegaagto u noqonayaa dadka sida gaarka ah u xiiseeya diblomaasiyadda, siyaasadda arrimaha dibadda/gudaha, axdiyada caalamiga ah, sirdoonka iyo sooyaalkaba. Wuxuu ku dhex-gaynayaa duruufihii gudaha, danihii shisheeye, dulmigii Siyaad.
Intaas oo isbahaystay waxay madaxa dhulka ugu dhufteen dowladdii ugu xoogga badnayd Afrika, marka laga reebo dhowr waddan. Inta aan ku guda jiray buuggan akhrintiisa, waxay ila ahayd inaan la socday danjiraha inkasta oo uu mar iga qoslinayey, mar iga yaabinayey, marna uu iga nixinayey.
Waxaad darsaysaa sida dhaqankii Soomaalida, dhaqaalihii iyo siyaasaddiiba ay u sii daxalaysanayeen, wuxuu toosh afar qaad ah ku ifinayaa gadh-qaadkii xumaa ee bohosha inoo horseeday. Wuxuu ku tusinayaa Itoobiya oo u ekayd Magangooye(Noole-ure) la cariyey, oo harjadaya raadinayana cid uu gantaalihiisa hore ku qabto.
Wuxuu kuu sawirayaa qalfooftii guud ee dhibaatooyin ku gadaannaa bulshada rayidka. Wuxuu ku dul-gaynayaa umad ay halakeeyeen abaaro, gaajo, qaxootinimo, xanuunno(daacuun iyo duumo), cadaadis, xabsi iyo xasuuq oo ku nool calool Nibiri oo caawimaaddii la siiyaba aysan gaarayn! Waxaa kale oo uu buuggu kuu bidhaamin dhacdooyin badan iyo waayo-aragnimo, waxaan ka maqnayn xogo ku saabsan ciidamadii kala duwaa ee Soomaalida(Millatari, Biliis iyo Nabad-sugid NSS)iyo saanaddoodii.
Wuxuu iftiiminayaa guushii Soomaaliya ka gaartay dagaalkii 77 iyo sidii loo lagtay. Wuxuu san hilmaamin waxqabadyadii waawaynaa ee uu Siyaad Barre ka tagay.
Waxaad dhex tagaysaa safaarad ku taal Muqdisho oo dal shisheeye leeyahay, waxaad dheehanaysaa saabka, qaab-dhismeedka iyo waaxyaha kala duwan ee safaaradda. Qoraagu kama uu sarriiiganayo in uu xuso xagjirnimada asal-raaca ah ee Soomaalida dhiiggooda ku jirta taas oo horseedi la’ diblomaasiyiinta dalalka shisheeye inay fahmaan oo dhexgalaan shacabka Soomaalida. Arrintaas ayaa sababtay in macalimiinta shisheeye ee jaamacadaha dhiga ay ka cararaan waddanka.
Waxay kale oo sababtay diblomaasiyiinta iyo danjire-yaasha dalalka qalaad ka yimid inaysan jeclaysan ku noolaanshaha caasumadda Soomaaliya ee Muqdisho. Baryo iyo nacayb ayeey isku darsadeen!
Qoraa peter wuxuu xoogaa dul istaagayaa burburkii iyo isqalashadii umadda Soomaaliyeed. Foolxumooyin badan ayuu afka ku dhufanayaa. Wuxuu ka dhigayaa inay ahaayeen wayba u ekaayeene umad gajaysan oo haddana horar ah, in sidii bahalada dad cunka ah in hilib samada looga soo tuuro ma ahane aan loo dhawaan karin.
Waxaa Maraykanku go’aan sadeen inay caawimo gaarsiiyaan shacabka Soomaaliyeed ee gaajada u dhimanaya, iyaga oo isticmaalayo diyaaro in samada looga soo daadiyo wixii la awoodo! Xogo kale oo muhiim oo Afrika ku saabsan ayaa ku qoran buuga. Waxaan uga bogan kartaa inaad akhrisid. Muudsiga iyo calalinta qofkale buuggaan uga dhargi maysid.
Waxaan jeclaan lahaa in sheekada buugga ku qoran ay isku toosan tahay bilow illaa dhammaad oo aysan jirin dib-u-noqod. Sheekada sida uu qoraagu kuugu wado markii uu gabo-gabo ku dhow yahay ayuu ku leeyahay, waagii aan Muqdisho imid ama waagii la isoo magacaabay. Wuxuu kaa kaxayn 1984tii, wuxuu ku gayn 1986dii, ka dib ayaad arkaysaa isaga oo ka sheekaynaya 1984tii ama 1985tii. Aragti ahaantay ilama qurux badna balse lagayaabe inay dad caadi la tahay.
Gudaha buugga waxaan ku arkay sheekooyin badan oo aan isdhaho sidee bay sheekadaan ula xiriiraan? Tan saddexaadna waa mid uu qoraagu ka afeeftay oo la xiriirta ogolaansha turjumidda buugga inkasta oo uu Kamaal dhowr jeer ku xusay buugga haddana waa in qof walba ogaado inay jiraan xeerar degsan oo la xiriira xuquuqda qoraaga.
Qaamuuskaan waxaa ku jira in ka badan 4000 eray oo muhiim ah, oo la xiriira ganacsiga, Dhaqaalaha, Maaliyadda, Suuq-geynta, Xisaabinta, Maamulka, Xafiisyada, Bangiyada, Xayeysiinta, Canshuuraha, Sharciyada ganacsiga, Farriimaha, Gaadiidka, Caymiska, Ganacsiga Caalamiga ah, Hantida ma guurtada ah, Warshadaha iyo kuwo kale oo badan. Qaamuuskaan waxaa lagu soo uruuriyey, awooddana la saarey erayada ganacsiga ee aadka loo isticmaalo. Eray kasta waxaa lagu qeexay Af-Soomaali aad u fudud, oo uu fahmi karo qof kasta oo Soomaali ah. Waxaan rajaynayaa in uu Qaamuuskaan noqodo hage tix-raaceed oo kaaliya dadka xiiseeya in ay fahmaan Erayada muhiimka ah ee la xiriira ganacsiga adduunyada. Buuggaan waxa aad ka heli kartaa: Moqdishu, Hargeysa, Bosaso, Garowe, Borama, Balaweyne, Nayroobi and Jigjiga.
Noole kasta oo adduunka guudkiisa saarani inkasta ha le’ekaadee wuxuu leeyahay cadow si gooni ah u ugaarsada, waxaana noole kasta oo dareen leh waajib ku ah inuu ku baraarugo degaankiisa ugu horayna barto cadowgiisa, kadibna la yimaadaa farsamo iyo xeelad uu isaga difaaci karo. Haddii uusan nooluhu la imaan farsamo iyo xeelad wuxuu noqonayaa mid baylah u ah una nugul inuu xilli kasta ku dhaco dabinka cadowgiisu u dhigayo iyo farsamooyinka uu ku ugaarsanaayo.
Haddaba qoraaga buuggaan wuxuu aqristaha weydiinayaa in Soomaalidu ku baraarugsanyihiin cadawgooda soo jireenka ah?
Buuggaani wuxuu tooshka ku ifinayaa cadowga dhabta ah ee ummadda Soomaaliyeed. Wuxuu muujinayaa qaybaha cadowga Soomaaliyeed iyo sidda qayb waliba u shaqayso.
Wuxuu kale buuggaani xusayaa sidii cadowga Soomaaliyeed u burburiyay qarankii Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka uu shacabka Soomaaliyeed u gaystay burburkii kadib. Siddoo kale buuggaan wuxuu soo bandhigayaa barnaamij dib u heshiisiin ah iyo tallooyin qoraagu xal u arko.
Siddoo kale qoraagaan ayaa muuqaal guud ka bixiyay xaaladaha kala duwan ee jiilba jiilka kale. Asigoo si guud ugu sharaxaayo buuggiisa wuxuu yiri “Marka aan muuqaal guud ka bixiyo adduunka aanu ku noolahay waa nolol la isku imtixaanayo sida diinteenu inoo sheegtay.
Dadka maanta adduunka ku dul nooli waxay soo mareen marxalado kala duwan, kuwaasoo jiilba jiilka ka dambeeya ugu tagayey raadraac dhibaatooyinkii ay soo mareen iyo siyaalihii ay ula soo tacaaleen. Sidaas darteed jiil kasta wuxuu keenayey farsamooyin cusub si uu wax uga badelaan noloshii jiilkii ka horeeyay iyagoo wixii wanaagsanaana xoojinayey wixii xumaana suulinayey marba inta suuro galka ah.
Waxyaabihii ugu xumaa ee adduunku soo maray waxaa kamid ahaa dagaalada sokeeye iyo dagaalada qabaa’ilada, kuwaasoo maanta dadka fekerayaa ka xoroobeen kana samaysteen gaashaan iyo xijaab, waxaana tusaale fiican inoo noqon kara sida qaaradaha adduunku arintaas guulaysigeeda ugu kala xoog badanyihiin”
Qoraaga ayaa tusaale usoo qaatay gumaadkii Siiralyoon, Soomaaliya Burundi, Ugaandha, Laybeeriya, Koongo, Kenya iyo inta badan qaarada Afrika, laakiin marka Soomaaliya laga reebo inta kale waxay leeyihiin walaalo ku dhaarta marka xaaladdu dhexdooda ka kharaaraato waana laga dhiidhiyaa gumaadkooda aakhirkana waa la xaliyaa.
Laakiin dalka Soomaaliya wuxuu ka duwan yahay qaarada inteeda kale waxaana ka dhacay gumaad in ku dhow labaatan sano. Inkastoo marar badan la isku dayay in laxaliyo hadana weli waxaa meesha ku jira suul iyo faro isdhaafsan xalkasta oo la keenana waa la xagal daaciyaa.
Sidaas darteed waxaa halkaas ka muuqda in aysan lahayn walaalo ku dhaarta marka laga reebo Jabuuti oo dhuuntii qalashay sidii ay u qaylinaysay welina qaylinaysa, waxaana suuro gal ah in cawliga Soomaalidu Jabuuti ku tilmaamo waa reer hebel iyo qolo ayay u xaglinaysaa.
Buuggaan inta aan ku jiray aqriskiisa waxaan dareemay qiirooyin iyo dhacdooyin xanuun badan. Sawabtoo ah wuxuu dhinacyo badan ka taabtay erayadaan soo socda:
Waa seddax Soomaalida dhibaato badan u gaystay qaarkiis aanan dalka laga suulinin wali, waa hawl sugayso Soomaalida inay dalkooda ka suuliyaan seddaxdaasi. Waxaa loo baahanyahay koox abaabulan oo dadka ku beera qiiro wadaninimo iyo helitaan qaran, kana madax banaan qabiil, qabyaalad iyo waxa xun ee ay hoosta ku wataan. Shacabkana u suuro geliya in ay kasoo kabtaan wixii ka lumay intii burburku kajiray dalka, kana baxaan qaxootinimada.